ကာဒီနယ်ကြီးချာစ်ဘို ၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက်သာမာန် တနဂ်နွေနေ့ သြ၀ါဒ | Radio Veritas Asia
ကာဒီနယ်ကြီးချာစ်ဘို ၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက်သာမာန် တနဂ်နွေနေ့ သြ၀ါဒ
မျိုးကြဲသူဥပမာ ဇူလှိုင်လ၊ ၁၂ရက်၊ ၂၀၂၀
ဟေရှာယ ၅၁ဝ-၁၁- မိုးသည် မြေကြီးကို အသီးများစွာသီးစေသည်။
ဒု - ရောမ ၈း၁၈-၂၃ ခရစ်တော်ကျမ်း - မာထေ ၁၃၁-၂၃
သခင်ယေဇူး၌ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့ - သခင်ယေဇူး၌ အေးချမ်းသာယာခြင်း- ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြရပါစေ။ သင်တို့၏ မိသားစုများသည်လည်း ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း ခံစားကြ ရပါစေ။ မဆုတ်မနှစ် ရောဂါပိုး၏စိန်ခေါ်မှုကြားမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ဆက်လက်ခိုင်ခံ့နေပါတယ်။ ကယ်ဆယ်လွတ်မြောက်တဲ့ နေ့ရက်တွေ နီးကပ်လာပါစေ။
ဒီနေ့ ကြားနာရခဲ့တဲ့ကျမ်းချက်(၃)ခုစလုံးက သစ်ပင်ပန်းပင် တိရစ္ဆာန်နဲ့ သဘာဝဘေးပတ်ဝန်ကျင်- ecology ကို ပြောနေတယ်။ ဟေရှာယက နိုင်ငံတော်ရဲ့ သဘာဝကြွယ်ဝမှုကို ပြောထားတယ်။ မိုးရွာတယ်။ အသီးနှံများ စွာရတယ်။ ဧဝံဂေလိတရားမှာ- မျိုးစေ့ကြဲသောသူရဲ့ပုံဥပမာကို စိတ်ထဲစိမ့်ဝင်စေတယ်။ ဒီနေ့သခင်ယေဇူးရဲ့ သွန်သင်ချက်က တကဲ့လှပတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ရတနာဖြစ်တယ်။
သခင်ဟာ သဘာဝကို နှစ်သက်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ပုံကို- လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ နှင်းပန်းပင်၊ ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ ငှက်သတ္တဝါတွေထဲမြင်စေချင်တယ်။ သဘာဝရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလှကို ကြည့်ပြီး တရားဒေသနာဟောတော်မူတယ်။
ကောင်းတဲ့အပင်၊ ကောင်းတဲ့အသီး- မုန့်ညှင်းစေ့၊ စပျစ်ပင်၊ အနွယ် အကိုင်း- နေရောင်ခြည်- မိုးရွာအကြောင်းစုံ အခြေခံပြီးတရားဟောခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ရဲ့ - ပုံဥပမာ- “မျိုးစေကြသူ”အကြောင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဘွယ်ရာ ဥပမာ၊ ဥပစာလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာနေရာများတွေမှာ Covid ရဲ့ အကြင်နာကင်းမဲ့တဲ့ အတိုက်အခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန် ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဒီကျမ်းချက်ရရှိကြတယ်။ မအောင်မြင်နိုင်သေးတဲ့ ဗိုင်းရပ်(စ်)အချိန် ဒီနေ့ကျမ်းချက်က နှစ်သိမ့်မှုကို ရရှိစေတယ်။ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ဒို့ကမ္ဘာကြီးအတွက် ရောဂါပျောက်ကင်းစေမဲ့ အပင်တမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးကြဲသူ ဥပမာကို ကြည့်တဲ့အခါ (၄)မျိုး (၄)စားတွေ့ရတယ်။ ၁။ တချို့မျိုးစေ့- လမ်းဘေးကျပြီး- ငှက်တွေအစာဖြစ်သွား။ ၂။ ဒုတိယမျိုးစေ့တွေကျ- ကျောက်ပေါတဲ့မြေပေါ်ကျတယ်။ ၃။ တတိယမျိုး- ဆူးပင်တွေထဲကျ ဆူးတွေကပဲ ညဉ်းဆဲ၊ ချုပ်သတ်ပစ်တယ်။ ၄။ နောက်ဆုံး မြေကျတော့၊ ကောင်းတဲ့မြေပေါ်ကျပြီး အဆတစ်ရာမက အသီးအနှံထွက်တယ်။
ဒီဥပမာကို Covid နဲ့ ပူးတွဲနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။ မျိုးကြဲသူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြေ(၄)မျိုး(၄)စားရှိသလို၊ Covid အချိန်မှာ လူ(၄)မျိုး(၄)စားတုံ့ပြန်ကြတယ်။ Covid သည် ရန်သူဆာတန်ရဲ့ မျိုးစေ့။ ဘုရားသခင်သည် လူသားအားလုံးကို ဒီ Covid အဆိပ်ကို- တိုက်ဖျက်ဘို့ သနားခြင်းဂရုဏာမျိုးစေ့ကြဲခဲ့တယ်။ ။ ဒီဂရုဏာမေတ္တာအကြင်နာမျိုးစေ့ဟာ လက်ခံတဲ့လူ(၄)မျိုး(၄)စား ပေါ်ကျ ခဲ့တယ်။ ။
ပဌမ။ ။ကမ္ဘာမှာ Corona ဗိုင်းရပ်စ် ပေါက်ကွဲတဲ့အခါ၊ အကြင်နာ မျိုးစေ့ရရှိပေမဲ့- တကိုယ်ကောင်းဆန်၊ တခြားသူများကို ကြောက်ရွံ့၊ ရွံ့ရှာပြီး၊ အတ္တစိတ်နဲ့ မျိုးစေ့ပါသွားတယ်။ ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။
ဒုတိယ။ ။ အကြင်နာမျိုးစေ့ရရှိပေမဲ့ ဒုတိယလူတန်းစားကတော့ သူတို့နှလုံးသားက ကျောက်တုံးလို မာကြောနေတဲ့အတွက် တုံ့ပြန်မှုမရှိဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။ လက်ခံမှုမရှိဘူး။ ချမ်းသားကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံများတောင်၊ သောင်းသိန်းမက၊ သေစေခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးစားပွဲပလင်မှာ အသက်စတေးခံရတယ်။
တတိယ- ဒီအမျိုးစားက၊ ဦးစွာသနားခြင်းမျိုးစေ့ရရှိပြီး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစား နေရသူများကို ရက်ရောစွာတုံ့ပြန်ပေမဲ့၊ ကိုယ့်ရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြောင့်၊ ဆင်းရဲသူများကို မေ့သွားကြတယ်။ လူသိန်းသန်းမက၊ ရောဂါကူးနေကြပေမဲ့- သိန်းပေါင်းများစွာ သေနေ ကြပေမဲ့- ဘာမှ လှုပ်ရှားမှုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြတော့ဘူး။
စတုတ္ထ- နောက်ဆုံးလူတန်းစားများကျတော့၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဘာသာရေး၊ ဆက်ကပ်သူများ၊ စေတနာအလှူရှင်များ ရက်ရက် ရောရော ကိုယ့်ကျိုးစွန့်ပြီး၊ မေတ္တာနဲ့ရောဂါကူးစက်ခံနေရသူများကို ဂရုစိုက်သနားကြင်နာမှုပြကြတယ်။ သူတို့ဟာ ထောင်၊ သောင်း သိန်း သန်း ချီပြီ၊ ကယ်တင်ခဲ့တယ်။
ဒီလူ(၄)မျိုး(၄)စားကနေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လူသားများဟာကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ သိပပညာ ရှင်များ အဆိုအရ လာမဲ့နှစ်များမှာ ရောဂါကူးစက်မှု ပိုမိုဆိုးဝါးလာ လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက အခြားရောဂါ(၃)မျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရတယ်။ - ပစ္စည်းကြွယ်ဝမှုမညီမျှခြင်း - ဝင်ငွေ ကွာဟမှု- မတရားဖြစ်ခြင်း၊ - ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကပ်ဘေးများဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမျိုးကြဲသူ ဥပမာက - မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးဘို့ တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။ It isaparable of hope. လူသားများ- မှောင်မိုက်နေတဲ့ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကြီးကို ဖြတ်သန်းနေတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျစရာရှိတယ်။ We are disturbed. သဘာဝက၊ သတိတစ်ခုပေးနေတယ်။ ဆက်ဆံရေး(၄)ခုမှာ အဆင်မပြေကြရင်- ကျွန်ုပ်တို့ သောကတွေပြဿနာတွေ ရှိကြမယ်။ ဆက်ဆံရေး(၄)ခုက
- with oneself - ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့
- with one another - တပါးသူနဲ့
- with creator - ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့
- with creation - ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့
သခင်ယေဇူးဟာ မျှော်လင့်ခြင်းကို ယူဆောင်လာပါတယ်။ မည်မျှပင်ခက်ခဲ ပါစေ။ မည်မျှပင်ခက်ထန်ပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့အများဟာ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်ခံပြီး ကောင်းတဲ့မြေဆီလွှာဖြစ်ဘို့လိုပါတယ်။ ကောင်းသော အပင်သည် ကောင်းသော အသီးကိုသီးတယ်။ - ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာအတွက် ဘာခွန်အားများ ယူကြအုံးမလဲ။ ဘဝမှာ မျိုးကြဲသူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်။ သူရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် စကားသည် မျိုးစေ့ဖြစ်ပါတယ်။ Not wealth, not power, not the mad rush for worldly glory.
“The sower sows the Word. မျိုးကြဲသူဘုရားရှင်ဟာ တရားစကားကို ကြဲတယ်။ ပေါင်းပင်မကြဲဘူး။ ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကြဲပေမဲ့၊ ခုနပြောတဲ့အတိုင်း ရလဒ်(၄)မျိုး(၄)စား- ခံယူလက်ခံသူတွေ ကွာသွားတယ်။
၁။ ပဌမ ခရစ်ယာန်အမျိုးအစား - လမ်းဘေးကျတဲ့မျိုးစေ့မျိုး၊ ဘေးနေတဲ့ ခရစ်ယာန်များ၊ Window shopping ခရစ်ယာန်။ သက်သက်လိုက်ကြည့်၊ ခရစ်ယာန်ဘဝကို Sunday များနာရုံပဲ၊ ပြီးပြီ၊ တာဝန်ကျေပြီ။ Some rituals to be observed ဒူးလေးထောက်လိုက် Holy water လေးတို့လိုက်။ ပက်လိုက်၊ Sign of the cross- automatic : Nothing touches the heart ဘာမှ အကျင့်ပြောင်းလဲမှုမရှိ။ ကြည်ညို လေးစား သူများဖြစ်ပြီး သခင်ရဲ့ - တမန်တော်ကြီးများဖြစ်မလာဘူး။ စိန်ခေါ်မှုကို ရှောင်နေတယ်။ မိမိကားစင်ကို နေ့စဉ်ထမ်းဆောင်ဘို့၊ ရှောင်တယ်။ တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းထဲမှာဘဲ၊ တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေတယ်။ ငှက်တွေကလာပြီး သခင်ယေဇူးရဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့၊ နှုတ်ကပတ် မျိုးစေ့ကို ယူပစ်တယ်။
၂။ ဒုတိယခရစ်ယာန်အမျိုးစား - ကျောက်ဆောင်ပေါ်ကျတဲ့မျိုးစေ့ သနား ကြင်နာမှုခြောက်သွေ့ နေတယ်။ တောင်ယာလုပ်ဘူးတဲ့လူ ပိုနားလည် လွယ်မယ်။ တောင်ယာထဲမှာ လူသွားလမ်းလုပ်ထားတယ်။ တောင်ယာထဲ ကျောက်ဆောင်တွေ ထူထပ်တယ်။ တောင်ယာထဲ ဆူးပင်တွေလည် ပေါတယ်။ အခုကျောက်ပေါ်ကျတယ်တဲ့မျိုးစေ့က၊ ဘေးလူတွေရဲ့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ- ကြေကွဲနေတဲ့ဘဝကို မြင်ပြီး လုံးဝစိတ်နှလုံးလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။
သခင်ယေဇူးရဲ့ နှိုးဆော်တဲ့စကားသံ၊ Be compassionate as your heavenly Father is compassionate – စကားက နားပင်းတွေ ပြောရသလိုဖြစ်တယ်။
ပူလောင်နေတဲ့ အတ္တစိတ်က- ဘုရားရဲ့ သတင်းကောင်းကို သေစေတယ်။ ဒီမျိုးစေ့က အမြစ်မစွဲတော့ဘူး။ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အသက်(၃၀)မှာ သေဆုံးကြပြီး၊ အသက်(၅၀)၊ (၈ဝ)ရောက်မှပဲ သင်္ဂြိုလ်ကြတယ်။ ၃ဝ-၅ဝထိ မေတ္တာတရားနဲ့ မနေနိုင်မျှော်လင့်ခြင်းမဲ့ ဖြစ်နေကြတယ်။
၃။ တတိယခရစ်ယာန် အမျိုးအစား - ကုန်ကူးကုန်ဝယ်လုပ်တဲ့ ခရစ်ယာန် ၊ Prosperity Gospel- ဘုရားနဲ့ ကုန်ကူးတယ်။ ဘုရားရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် ကို လက်ခံမဲ့အစား၊ ဘုရားလက်ထဲမျိုးစေ့ ဒေါ်လာ(၁ဝဝ)ထည့်- ပြန်ပြီး ၁ဝဝဝရဘို့။ ဘုရားစီက သိန်းဂဏန်းမြင်ရင်- ထောင်ဂဏန်းကို စွန့်နိုင် ရမယ်။ theory ကို လိုက်တယ်။ အဲ့တော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်က ဘဝမှာ ဖူလုံကြွယ်ဝဘို့ မာနထောင်လွှားခြင်းကို ဖြစ်စေတယ်။ ဘုရား နှုတ်ကပတ်တော်က၊ ဆူးခြုံနဲ့ အဖိအသတ်ခံရတယ်။ သတင်းကောင်း မျိုးစေ့ကို ကိုယ့်ပစ္စည်းအကျိုးအမြတ် အတွက် ပိုက်ဆံရှာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်။ သာမာန် ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသလို- စီးပွားရေးမျက်စိနဲ့ ဟောကြားနေတဲ့ တရားဟောဆရာ/မများ Pastors လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
၄။ စတုတ္တ ခရစ်ယာန် များ - ပွင့်လင်းရိုးရှင်းနှလုံးသားရှိကြတဲ့လူကို သခင်ယေဇူးသူတို့ကို ချီးမွမ်းတယ်။ မာ ၁၁၂၅ “ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို အစိုးရတော်မူသော အဘ၊ ကိုယ်တော်သည် ပညာအလိမ္မာနှင့် ပြည့်စုံသော သူတို့အား၊ ဤအရာများကို ထိမ်ဝှက်ထားလျက် သူငယ်တို့အား ဖော်ပြ တော်မူသည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏။”
စတုတ္ထနောက်ဆုံး ခရစ်ယာန်တွေက ကလေးတဦးကဲ့သို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေပြီး နှုတ်ကပတ်တော် ကျရောက်တဲ့ မြေအကောင်းစားဖြစ်တယ်။ ဘုရားရှင်က သူတို့ကို ငြိမ်းချမ်းခြင်းပေးတယ်။
Gives them meaningful relationship. အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးပေးတယ်။ သူတို့ဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိနေထိုင်တယ်။ အလေးအနက်ရှိရှိနဲ့ ကွယ်လွန်သေဆုံးကြတယ်။ Generosity and commitment mark their life၊ ရက်ရောမှု စေတနာနဲ့ ဆက်ကပ်မှုဟာ သူတို့ဘဝမှာ ပြတ်သားထင်ရှားပါတယ်။
ဤသူများဟာ Mother Teresa ပြောခဲ့သလို၊ ကြွယ်ဝသည်ဖြစ်စေ၊ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားကို အမြဲကျေးဇူးတင်နေတယ်။ ဒပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အသက်ရှင်နေတဲ့ ဧဝံဂေလိကျမ်းစားဖြစ်တယ်။ “Their life witness is the only Bible non-Christians can read.” သူတို့ဘ၀က ခရစ်ယာန် မဟုတ်သူများဖတ်ရှုနေတဲ့ ကျမ်းစာတော်ဖြစ်တယ်တဲ့။
နောက်ဆုံးတရားစီရင်တဲ့နေ့မှာ သခင်ယေဇူးချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်တယ်။
“ငါအဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်တုံးက- ကို ရှပ်အင်္ကျီပေးတယ်။ ငါဆာငတ်နေတုံးက ငါ့ကို အစားအသောက်ပေးတယ်။
မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ ဗိုင်းရစ်က ဘာပြောလဲဆိုတော့၊ ဒို့လူသားတွေရဲ့ အနာ ဂတ်သည် စူပါအင်းအားကြီးတဲ့လူတွေ၊ နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူး။ တနေ့နေ့ကျPersian ဂရိတ်- ရောမ- အင်ပါ ယာတွေပြိုလဲသလို ဖြစ်ကြမှာ။
သိန်းသန်းမက- ဖျားနာနေတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက- ဘေးဥပဒ်ရောက်နေတယ်။
လောဘစိတ်၊ စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်းတွေ- စိတ်ကြီးဝင်တာတွေဟာ ဘုရားရှင် ရဲ့ ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့မြတ်ကို- ကောင်းတဲ့မြေပေါ်ကျဘို့ အဟန့်အတား ဖြစ်နေတယ်။ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ကပ်ရောဂါ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ မမျှမတမှု၊ ဖိနှိပ်မှု၊ အငတ်ဘေးတွေဟာ- တောတောင်ချုံပုပ်လို ထွားကြိုင်း နေတယ်။
-ကောင်းသောသတင်းကို ကြဲဖြန့်သူများ၊ ရိုးသားကြိုးစားစစ်မှန်ပြီး စေတနာ အပြည့်အဝရှိတဲ့ သခင်ယေဇူးတပည့်တမန်တော်များ လိုအပ်ပါ တယ်။
Facebook, YouTube, Viber, Internet တွေမှာ အတင်းအဖျင်း ပြောမဲ့အစားမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေ ကြဲဖြန့်မဲ့အစား၊ ကောင်းသောမျိုးစေ့ ကြဲတဲ့- သခင်နောက်လိုက်များ၊ ပရောဖက် ဟေရှယရဲ့သံစုံသီချင်းသံလေး လိုပဲ- နားဆင်ရတာမင်္ဂလာရှိပါတယ်။
ဟေရှယ- ၅၂:၇ “ငြိမ်သက်ခြင်း၏ ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ပြောကြားသူ၊ ကယ်တင်ခြင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာ၏ ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ကြားပြောသူ၊ သင်၏ ဘုရားသခင်စိုးစံတော်မူ၏ဟု ဇီအုန်မြို့အား ပြောသောသူ၏ ခြေတို့သည်။ တောင်ပေါ်မှာ တင့်တယ်လှစွာတကား။” မိသားစုထဲမှာ- နိုင်ငံတော်မှာ- ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းသော မျိုးစေ့ကို ကြဲဖြန့် တတ်သောညီအစ်ကို မောင်နှမများဖြစ်ပါစေ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ကျန်းမာခြင်း ကျေးဇူးတော် သင်တို့တစ်ဦးစီထဲ အမြစ်တွယ်နိုင်ပါစေ။